मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने काम कहाँ पुग्यो ? यो समयमा आइपुग्नेछ मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा « OSNepal.com :: Latest News,Breaking News, Latest, Politics, World, Entertainment, Sports, Technology, Interview, Nepal News
मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने काम कहाँ पुग्यो ? यो समयमा आइपुग्नेछ मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा
२८ डिसेम्बर २०१८ मा ठेकेदार कम्पनीद्वारा २१ डिसेम्वरमा फिर्ता लिएको पत्रलाई अस्वीकृत गरी ठेक्का तोडेको पत्रलाई पुन स्थापित गरी काममा नफर्कने जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि मन्त्री बिना मगरको पहलमा खानेपानी मन्त्रालय, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले ठेकेदार कम्पनिलाई वार्ताद्वारा समस्याको समाधान खोज्न र काममा फर्कन आग्रह गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनिलाई काममा फर्काउन कुटनीतिक लगायतका क्षेत्रबाट निम्नानुसार पहल गरेको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनिले काममा फर्कन नमानेपछि मेलम्ची विकास समितिले गत शुक्रबार ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेको थियो । मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गरेपछि आयोजनाको धरौटी रकम रु. २ अर्ब ६५ करोड सरकारको खातामा आउन बाटो खुलेको छ । तर, यही बीचमा सिएमसी कम्पनिलाई नै काममा फर्काउन मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डले वार्ता गरिरहेको छ ।
खानेपानी मन्त्री बिना मगर सिएमसी कम्पनिलाई नै काममा फर्काउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहेकी छिन् । सिएमसी कम्पनिले आयोजनास्थल छोडेर गएपछि उनको पहलमा ठेकेदार कम्पनिसँग पटकपटक वार्ता गरिए । ती सबै वार्तामा सम्भव सबै वैधानिक उपायहरुको खोजी गरी काम जारी राख्न उनले ठेकेदार कम्पनिलाई आग्रह गर्दै आएकी छिन् । २५ माघमा, जतिबेला मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्दै थियो, त्यतिबेला मन्त्री मगरले पठाएको वार्ता टोलीले सिङ्गापुरम सिएमसी कम्पनिका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्दै थियो । यता मन्त्रालय र मेलम्ची बोर्डले पनि कानूनी दृष्टिले धरौटी जोगाउन ठेक्का तोड्ने निर्णय गरे पनि सिएमसीसँग सहकार्यको ढोका बन्द नभएको प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
आयोजनाको अधिकांश काम सकिएको परिस्थितिमा ठेक्का तोड्दा र नयाँ टेण्डर गर्दा त्यसले लागत बढाउने, कानूनी झमेला आउने, सिएमसीसँग काम गरेका नेपाली कामदार र ढुवानीकर्ताको असहयोग हुने र समयअवधि पनि लम्बिने निश्चित छ । मन्त्री मगरकै भाषामा ‘नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जानु भनेको मेलम्चीको लागत बढ्नु र आयोजनाको समय लम्बिनु हो ।’ उनी त्यसो गर्न चाहन्नन् । त्यसकारण सिएमसीलाई नै काममा फर्काउन उनले अन्तिम कसरत गरिरहेकी छिन् । गत साता सिङ्गापुरमा सम्पन्न वार्ता सकारात्मक रहेको स्रोतको दावी छ । मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘सिएमसीको पनि लागत बढेकाले केही कुरामा नेपाल सरकार लचिलो भइदिओस् भन्ने उनीहरुको चासों छ । हामीले वैधानिक र कानूनी प्रक्रिया हेरेर लचक बन्न सकिने सन्देश दिएका छौं, वार्ता निकै सकारात्मक भएको छ, सम्भवतः सिएमसी नै काममा फर्किन्छ र यो अन्यौलताको अन्त्य हुन्छ ।’
कानूनविदका अनुसार मेलम्चीको जिम्मा अरु कम्पनिलाई दिँदा नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो झण्झटिलो मात्र नभएर लागत रकम पनि ह्वात्तै बढ्छ । समय लम्बिन्छ । अघिल्लो निर्माण कम्पनिको बक्यौताको झमेलाको नैतिक दायित्व पनि सरकार र आयोजनाले लिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सिएमसीसँगै नयाँ समझदारी बनाएर काममा फर्काउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ । उनीहरुका अनुसार सिएमसी फर्काउन कुनै कानूनी जटिलता छैन । दुवै तर्फबाट ठेक्का तोड्ने निर्णय भएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सिएमसी र मेलम्ची बोर्डले ठेक्का तोडेको निर्णय फिर्ता लिने बित्तिकै सिएमसीलाई काममा फर्काउने कानूनी बाटो खुल्छ । सिएमसीलाई जिम्मा दिँदा नयाँ टेण्डर गर्नुपर्दैन । उनीहरुले उठाएका मागमध्ये कानूनी दृष्टिले मिल्ने मागमा सरकार लचक भए पुग्छ ।’
अंग्रेजलाई युद्धमा हराएको सम्झनामा पाल्पामा ऐतिहासिक रणउजिरेश्वरी भगवतीको रथयात्रा सम्पन्न
पाल्पा, ८ भदौ- पाल्पाको तानसेनमा शनिबार ऐतिहासिक रणउजिरेश्वरी भगवतीको रथयात्रा निकालिएको छ । नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा
झापामा शिक्षकको कुटाईबाट विद्यार्थीको खुट्टा भाचियाे
भद्रपुर । शिक्षकलाई बाथरुमको पानी खुवाएको निहुँमा शिक्षकको कुटाइबाट एक जना विद्यार्थीको खुट्टा भाँचिएको छ
ललितपुरको मङ्गलबजार परिसरमा भीमसेन जात्रा मनाइँदै
ललितपुर, ७ भदौ – ललितपुरको मङ्गलबजार परिसरमा आज साँझ भीमसेन जात्रा मनाइँदै छ । व्यापार
बौद्धधर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो पर्व पञ्चदान महापर्व भदौ ११ मा हुने
काठमाडौँ, ७ भदौ : बौद्धधर्मावलम्बीको सबैभन्दा ठूलो पर्व पञ्चदान महापर्व यही भदौ ११ गते भव्यरुपमा